तपाइको ठाँउको हुलाक संकेत नम्बर कति होला ? हुलाक संकेत नम्बर (Postal Code) थाहा पाउन हेर्नै पर्ने यो जानकारी । ~ Arjel's Diary
तपाइको ठाँउको हुलाक संकेत नम्बर कति होला ? हुलाक संकेत नम्बर (Postal Code) थाहा पाउन हेर्नै पर्ने यो जानकारी ।
तपाइलाइ थाहा नहुन सक्छ Postal Code हुलाक संकेत नम्बर के हो ? यसले कसरी काम गर्छ भनेर यो तपाइ हाम्रै ठाँउमा रहेको हुलाक कार्यालयको कार्यालय संकेत नम्बर हो जुन चिठी पत्रमा प्राय लेख्ने गरिएको हुन्छ यो कोडले अन्तिम पटक जहाँबाट चिठी पत्र तेस्रो पक्षमा वितरण हुन्छ त्यो हुलाक कार्यालयलाइ जनाउछ । नेपालको हुलाक संकेत नम्बर Postal Code हरु थाहा पाउन यहाँ तलको चित्रमा क्लिक गर्नुहोस तपाइ जहाँ भएपनि आफ्नो ठाउँको हुलाक संकेत नम्बर (Postal Code हेर्नुहोस् ।